chena acrylic sheet Vagadziri & Vatengesi - China chena acrylic sheet fekitori
Acrylic jira rakakanda acrylic sheet uye extruded acrylic sheet.
Kanda acrylic sheet: yakakwira mamorekuru uremu, hwakaomarara kuomarara, simba uye yakanakisa kemikari kuramba. Rudzi urwu rweplate runoratidzwa nediki batch kugadzira, kusingaenzanisike kuchinjika muvara sisitimu uye pamusoro pekushongedzwa maitiro, uye izere chigadzirwa magadzirirwo, akakodzera akasiyana akakosha zvinangwa.
hiakindi acrylic jira
Opal Acrylic Sheet rakanakira kunyorera kunoda runako uye kujekesa kweakriliki uko pachigarire chakakwirira chigadzirwa chigadzirwa chinodiwa. Iyo inochengetedza yayo inoenderana yakajeka kumucheto ruvara pamberi uye mushure mekunyepedzera, ichipa zvigadziriso uye inoratidza hunodikanwa elegance iyo inorasika pamwe neimwe inokanganisa yakagadziridzwa mapurasitiki ayo anopa iyo "indasitiri" kutaridzika.
White acrylic ine zvakawanda zvinobatsira hunhu zvinoita kuti ive yakasarudzika zvinhu kune akasiyana mhando zvigadzirwa. Zvikwangwani, kuvheneka, akwariyamu, mumvuri, uye zvimwe zvakawanda zvigadzirwa zvemufenicha zvinoshandisa chena acrylic kuti vawane kupenya kwakanaka uye kwakanaka kunokwezva mutengi.
Acrylic sheet inonzi PMMA sheet, Plexiglass kana Organic girazi pepa. Zita remakemikari ndiPolymethyl methacrylate. Acrylic inobata izvo zvinoonekwa pakati pemapurasitiki nekuda kwekujeka kwakanyanya uko kupenya & kujeka sekristaro, inorumbidzwa sa "Mambokadzi wePurasitiki" uye inofadzwa kwazvo nema processor.
Izwi rekuti "acrylic" rinoshandiswa kuzvigadzirwa zvine chinhu chinotorwa kubva kuacrylic acid kana chinhu chakabatana. Kazhinji, inoshandiswa kurondedzera yakajeka, girazi-senge plastiki inozivikanwa se poly (methyl) methacrylate (PMMA). PMMA, inonzi zvakare acrylic girazi, ine zvivakwa zvinoita kuti ive sarudzo iri nani kune akawanda zvigadzirwa izvo zvingangodaro zvakagadzirwa negirazi.
translucent chena acrylic jira
1.imwe pc acrylic sheetpacking:
rakafukidzwa neunyanzvi bepa kana PE firimu pamaviri mativi, iyo yakavharwa firimu isina chero yedu compoany chiratidzo.
2.pamwe nhovo Bulk nhumbi kurongedza:
2 matani pahomwe, shandisa matanda mapallet uye esimbi mapallet pazasi,
nemapakeji efirimu mapakeji kutenderedza ese chengetedza chekufambisa.
3.Yakazara mudziyo mutoro kurongedza:
20-23 matani (anenge 3000pcs) echitsiko chetsoka makumi maviri ane 10 -12pallets.
Chena acrylic sheet iri ruvara rweakakanda acrylic sheet. Acrylic, inowanzozivikanwa seyakakosha kurapwa plexiglass. Iko kutsvagisa nekusimudzira kweacrylic kune nhoroondo yeanopfuura makore zana. Iyo polymerizability yeacrylic acrylic yakawanikwa muna 1872; iyo polymerizability yemethacrylic acid yaizivikanwa muna 1880; iyo synthesis nzira yepropylene polypropionate yakapera muna 1901; nzira yambotaurwa yekugadzira yakashandiswa kuyedza kugadzirwa kwemaindasitiri muna 1927; indasitiri yemethacrylate yaive muna 1937 Iyo yekuvandudza kugadzirwa iri kubudirira, nokudaro ichipinda muhombe-yakakura zvigadzirwa. Munguva yeHondo Yenyika II, nekuda kwekuoma kwayo kwakanyanya uye nemwenje wekutepfenyura, acrylic yakatanga kushandiswa muhwindo remhepo nendege yegirazi rekuona mukombi yemutyairi wetangi. Kuberekwa kwenyika yekutanga acrylic bathtub muna 1948 yakaratidza chiitiko chitsva mukushandiswa kweacrylic.